Limited Reopening – Bahan International Science Academy
August 7, 2020 webdev
I am very grateful to the Board of BFI for giving me the opportunity to lead the team at BISA, and I look forward to working with you so that your children are safe, happy and successful at our school. I have recordedashort video to tell youabit about myself, and you can watch that on the BISA Facebook page here: https://www.facebook.com/watch/?v=3437681736295226.
The Safe Reopening of the BISA Campus
The new academic year starts for all BISA students on Thursday, 13 August. On that day, we are very pleased to announce that following our A grade inspection from the Ministries of Education and of Health and Sport, all students in Year7and above will attend school for face to face lessons with their teachers. To facilitate the safe return of primary students in due course, the secondary and the High School schedule with five lessons per day will run from 12:30 to 4:30 pm. In addition, these students will benefit from online lessons in the mornings.
The authorities have not yet permitted the physical reopening of schools for primary and pre-school children. Our current plan is that these classes will return to school on Tuesday 1 September, and until then we will continue to provide online education. This is disappointing for all of us, but we must follow the guidance of the government, which has been so successful at limiting the impact of COVID-19 on this country.
If we are allowed to reopen for our younger students before 1 September, we will let you know immediately. Everything is ready for them to return to class, as you can also see on the Facebook page here: https://www.facebook.com/watch/?v=927082617716186. We look forward to welcoming them back. If we are not able to re-open for our primary children on 1 September, the parents affected will be offeredadiscount on tuition fees for the 2021-22 academic year, the size of which will be determined by the length of the delay.
Full details of our plans for the safe re-opening of the campus can also be found on Facebook here: https://www.facebook.com/486224215093230/posts/1168286640220314/?d=n. I am very grateful to Teacher Nelly and the team for working so hard on these preparations.
Schools and families all over the world are responding to the COVID-19 emergency with courage and imagination. Everybody at BISA is very grateful for your continued understanding and support for our school. We are determined to repay you by providing an excellent education for your children, whether that be face to face or online. I look forward to working in close partnership with you to enable your children to achieve their dreams.
BISA ကျောင်းကို ဦးဆောင်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ BFI ကို ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းနှင့် မိဘများ၏သား/သမီးများကို ကျောင်းနေပျော်၍ လုံခြုံသော စာသင်မှုပတ်ဝန်းကျင်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ဖို့မိဘတို့ နှင့်အတူ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွနိုပ်နှင့် ပတ်သက်သော မိတ်ဆက် ဗီဒီယိုလေးကို ကျောင်း facebook page ရှိ ဖော်ပြထားသော link တွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ https://www.facebook.com/watch/?v=3437681736295226.
BISA ကျောင်းဝင်းကို လုံခြုံစွာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည့် အကြောင်း
လာမည့် သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ တွင် BISA ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် စာသင်နှစ်ကို ပြန်လည်စတင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန တို့ မှ လာရောက်စစ်ဆေးရာတွင် Aအဆင့်ရရှိခဲ့သောကြောင့် Year7နှင့် Year7အထက် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများသည် ထိုနေ့ တွင် ဆရာ/ဆရာမ များနှင့် face to face ကျောင်းပြန်လည်တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မူလတန်းကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၏ လုံခြုံရေးအတွက်လည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးသည့်အနေဖြင့် အလယ်တန်း ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများနှင့် အထက်တန်း ကျောင်သား/ကျောင်းသူများ၏ ကျောင်းချိန်ကို (၁၂း၃၀) နာရီမှ (၄း၃၀)နာရီ အထိ တစ်ရက်လျှင် စာသင်ချိန် ၅ ချိန် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ထို့ အပြင် ၄င်းကျောင်းသား/ကျောင်းသူများသည် နေ့ စဉ် နံနက်တိုင်း online စာသင်ချိန်များရှိမည်ဖြစ်ပြီး အလယ်တန်းကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအတွက် တစ်ပတ်လျှင် ၉ ချိန်၊ အထက်တန်းကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအတွက် တစ်ပတ်လျှင် ၁၂ ချိန် online မှ စာသင်ကြားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
မူကြိုကျောင်းသား/ကျောင်းသူများနှင့် မူလတန်းကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအတွက်မူ အစိုးရထံမှ ကျောင်းပြန်ဖွင့်ခွင့်မပြုသေးသည့်အတွက် physical learning ဖြင့် ကျောင်းပြန်တက်ရန် မဖြစ်နိုင်သေးပါ။ သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ မှ စတင်၍ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ (သောကြာနေ့ )အထိ online သင်ကြားမှုဖြင့် ပို့ ချရန် စီစဉ်ထားပါသည်။ ကျွနိုပ်တို့ ကျောင်းဘက်မှလည်း မိဘများနှင့် အလားတူစွာ ယခုလို စီစဉ်မှုမျိုးကို မဖြစ်စေချင်သော်လည်း Covid 19 ရောဂါကူးစက်နိုင်မှုလျှော့ချရေးအရ အစိုးရ၏ ညွှန်ကြားချက်အတိအကျ လိုက်နာရသည့်အနေဖြင့် စီစဉ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ ထက် စောပြီး မူလတန်းကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ ကျောင်းပြန်တက်ရန် ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိခဲ့ပါက မိဘများထံ ချက်ချင်း အကြောင်းကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ ကျောင်းပြန်တက်ရန်အတွက် ကျောင်းတွင်းပြင်ဆင်မှုများအားလုံး အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီးဖြစ်ပြီး ကျောင်းတွင်းပြင်ဆင်မှုများကို ဖော်ပြပါ Link တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ https://www.facebook.com/watch/?v=927082617716186 မူလတန်းကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ ထိ physical learning ဖြင့် ကျောင်းပြန်တက်ရန် ခွင့်ပြုခြင်းမရရှိခဲ့ပါက မိဘများအတွက် နောက်နှစ်စာသင်နှစ် (၂၀၂၁-၂၀၂၂) စာသင်နှစ်တွင် ကျောင်းလခကို ဈေးလျှော့ပေးရန် စီစဉ်ထားပြီး လျှော့ပေးမည့် နှုန်းထားမှာမူ ကျောင်းပြန်တက်ခွင့်ရရန် နောက်ဆုတ်မည့်နေ့ ရက်ပေါင်းတွင် မူတည်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျောင်းပြန်ဖွင့်နိုင်ရန်အတွက်နှင့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၏ လုံခြုံရေးအတွက် အသေးစ်ိတ်အစီအစဉ်များကို ဖော်ပြပါ link တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ https://www.facebook.com/486224215093230/posts/1168286640220314/?d=n ထိုသို့ သော ပြင်ဆင်မှုများအတွက် မူလတန်း ဒုကျောင်းအုပ်ဖြစ်သော Tr.Nelly နှင့်အဖွဲ့ ဝင်များကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှ ကျောင်းများနှင့် မိသားစုများအားလုံးသည် covid 19 ကြောင့်ကြုံရသော အရေးပေါ်အခြေအနေများကို ရင်ဆိုင်နေရချိန်ဖြစ်ပါသည်။ BISA အဖွဲ့ ဝင်တိုင်းသည် မိဘများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် နားလည်ပေးမှုတို့ အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်လျက်ရှိပါသည်။ face to face ဖြစ်စေ၊ online မှဖြစ်စေ မည်သည့်သင်ကြားမှုပုံစံနှင့်ဖြစ်ဖြစ် မိဘများ၏ သား/သမီး များအတွက် အကောင်းဆုံးသော ပညာရေးကို ပေးစွမ်းနိုင်ရန် ဆုံးဖြတ်ကြိုးစားလျက်ရှိပါသည်။ မိဘများနှင့်အတူ ပူးပေါင်း၍လည်း ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၏ မျှော်မှန်းချက် အိပ်မက်များဖြစ်လာရေးကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် မျှော်လင့်မိပါသည်။
BISA ကြောငျးကို ဦးဆောငျခှငျ့ပေးခဲ့တဲ့ BFI ကို ကြေးဇူးတငျရှိကွောငျးနှငျ့ မိဘမြား၏သား/သမီးမြားကို ကြောငျးနပြေျော၍ လုံခွုံသော စာသငျမှုပတျဝနျးကငျြကို ပေးစှမျးနိုငျဖို့ မိဘတို့နှငျ့အတူ ပူးပေါငျးလုပျဆောငျရနျ မြှျောလငျ့ပါသညျ။ ကြှနိုပျနှငျ့ ပတျသကျသော မိတျဆကျ ဗီဒီယိုလေးကို ကြောငျး facebook page ရှိ ဖျောပွထားသော link တှငျ ဝငျရောကျကွညျ့ရှုနိုငျပါသညျ။ https://www.facebook.com/watch/?v=3437681736295226.
BISA ကြောငျးဝငျးကို လုံခွုံစှာပွနျလညျဖှငျ့လှဈမညျ့ အကွောငျး
လာမညျ့ သွဂုတျလ ၁၃ ရကျနတှေ့ငျ BISA ကြောငျးသား/ကြောငျးသူမြား၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှဈအတှကျ စာသငျနှဈကို ပွနျလညျစတငျမညျဖွဈပါသညျ။ ပညာရေးဝနျကွီးဌာနနှငျ့ ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာန တို့မှ လာရောကျစဈဆေးရာတှငျ Aအဆငျ့ရရှိခဲ့သောကွောငျ့ Year7နှငျ့ Year7အထကျ ကြောငျးသား/ကြောငျးသူမြားသညျ ထိုနတှေ့ငျ ဆရာ/ဆရာမ မြားနှငျ့ face to face ကြောငျးပွနျလညျတကျရောကျရမညျဖွဈပါသညျ။ မူလတနျးကြောငျးသား/ကြောငျးသူမြား၏ လုံခွုံရေးအတှကျလညျး ထညျ့သှငျးစဉျးစားပေးသညျ့အနဖွေငျ့ အလယျတနျး ကြောငျးသား/ကြောငျးသူမြားနှငျ့ အထကျတနျး ကြောငျသား/ကြောငျးသူမြား၏ ကြောငျးခြိနျကို (၁၂း၃၀) နာရီမှ (၄း၃၀)နာရီ အထိ တဈရကျလြှငျ စာသငျခြိနျ ၅ ခြိနျ သတျမှတျထားပါသညျ။ ထို့အပွငျ ၎င်းငျးကြောငျးသား/ကြောငျးသူမြားသညျ နစေ့ဉျ နံနကျတိုငျး online စာသငျခြိနျမြားရှိမညျဖွဈပွီး အလယျတနျးကြောငျးသား/ကြောငျးသူမြားအတှကျ တဈပတျလြှငျ ၉ ခြိနျ၊ အထကျတနျးကြောငျးသား/ကြောငျးသူမြားအတှကျ တဈပတျလြှငျ ၁၂ ခြိနျ online မှ စာသငျကွားရမညျဖွဈပါသညျ။
မူကွိုကြောငျးသား/ကြောငျးသူမြားနှငျ့ မူလတနျးကြောငျးသား/ကြောငျးသူမြားအတှကျမူ အစိုးရထံမှ ကြောငျးပွနျဖှငျ့ခှငျ့မပွုသေးသညျ့အတှကျ physical learning ဖွငျ့ ကြောငျးပွနျတကျရနျ မဖွဈနိုငျသေးပါ။ သွဂုတျလ ၁၃ ရကျနမှေ့ စတငျ၍ စကျတငျဘာလ ၁ ရကျနေ့(သောကွာနေ့)အထိ online သငျကွားမှုဖွငျ့ ပို့ခရြနျ စီစဉျထားပါသညျ။ ကြှနိုပျတို့ကြောငျးဘကျမှလညျး မိဘမြားနှငျ့ အလားတူစှာ ယခုလို စီစဉျမှုမြိုးကို မဖွဈစခေငျြသျောလညျး Covid 19 ရောဂါကူးစကျနိုငျမှုလြှော့ခရြေးအရ အစိုးရ၏ ညှနျကွားခကျြအတိအကြ လိုကျနာရသညျ့အနဖွေငျ့ စီစဉျရခွငျးဖွဈပါသညျ။
စကျတငျဘာလ ၁ ရကျနထေ့ကျ စောပွီး မူလတနျးကြောငျးသား/ကြောငျးသူမြား ကြောငျးပွနျတကျရနျ ခှငျ့ပွုမိနျ့ရရှိခဲ့ပါက မိဘမြားထံ ခကျြခငျြး အကွောငျးကွားပေးမညျဖွဈပါသညျ။ ကြောငျးသား/ကြောငျးသူမြား ကြောငျးပွနျတကျရနျအတှကျ ကြောငျးတှငျးပွငျဆငျမှုမြားအားလုံး အဆငျသငျ့ဖွဈနပွေီးဖွဈပွီး ကြောငျးတှငျးပွငျဆငျမှုမြားကို ဖျောပွပါ Link တှငျ ကွညျ့ရှုနိုငျပါသညျ။ https://www.facebook.com/watch/?v=927082617716186 မူလတနျးကြောငျးသား/ကြောငျးသူမြား စကျတငျဘာလ ၁ ရကျနထေိ့ physical learning ဖွငျ့ ကြောငျးပွနျတကျရနျ ခှငျ့ပွုခွငျးမရရှိခဲ့ပါက မိဘမြားအတှကျ နောကျနှဈစာသငျနှဈ (၂၀၂၁-၂၀၂၂) စာသငျနှဈတှငျ ကြောငျးလခကို ဈေးလြှော့ပေးရနျ စီစဉျထားပွီး လြှော့ပေးမညျ့ နှုနျးထားမှာမူ ကြောငျးပွနျတကျခှငျ့ရရနျ နောကျဆုတျမညျ့နရေ့ကျပေါငျးတှငျ မူတညျမညျဖွဈပါသညျ။
ကြောငျးပွနျဖှငျ့နိုငျရနျအတှကျနှငျ့ ကြောငျးသား/ကြောငျးသူမြား၏ လုံခွုံရေးအတှကျ အသေးဈိတျအစီအစဉျမြားကို ဖျောပွပါ link တှငျ ဖတျရှုနိုငျပါသညျ https://www.facebook.com/486224215093230/posts/1168286640220314/?d=n ထိုသို့သော ပွငျဆငျမှုမြားအတှကျ မူလတနျး ဒုကြောငျးအုပျဖွဈသော Tr.Nelly နှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြားကိုလညျး ကြေးဇူးတငျရှိပါသညျ။
ကမ်ာဘတဈဝနျးလုံးမှ ကြောငျးမြားနှငျ့ မိသားစုမြားအားလုံးသညျ covid 19 ကွောငျ့ကွုံရသော အရေးပျေါအခွအေနမြေားကို ရငျဆိုငျနရေခြိနျဖွဈပါသညျ။ BISA အဖှဲ့ဝငျတိုငျးသညျ မိဘမြား၏ ပူးပေါငျးပါဝငျမှုနှငျ့ နားလညျပေးမှုတို့အတှကျ အထူးကြေးဇူးတငျလကျြရှိပါသညျ။ face to face ဖွဈစေ၊ online မှဖွဈစေ မညျသညျ့သငျကွားမှုပုံစံနှငျ့ဖွဈဖွဈ မိဘမြား၏ သား/သမီး မြားအတှကျ အကောငျးဆုံးသော ပညာရေးကို ပေးစှမျးနိုငျရနျ ဆုံးဖွတျကွိုးစားလကျြရှိပါသညျ။ မိဘမြားနှငျ့အတူ ပူးပေါငျး၍လညျး ကြောငျးသား/ကြောငျးသူမြား၏ မြှျောမှနျးခကျြ အိပျမကျမြားဖွဈလာရေးကို အကောငျအထညျဖျောနိုငျရနျ မြှျောလငျ့မိပါသညျ။